Tababbarka kaa caawinaya xagga dijitaalka ganacsigaaga, Intaad qaadanaysid xeeladaha saxda ah ee Iibinta adigoo adeegsanaya barta 'Instagram', Abuur xayeysiis, Samee ololeyaal suuqgeyn ah.
Kuwa doonaya inay sii dheeraadaan Waxaan diyaarinay barnaamijka ugu dhameystiran si aan kuu barano sida loo ganacsado ganacsigaaga.
Sannadkii 2021, suuqa e-ganacsiga ayaa dhaafay Lacagta 100 yuuroo In ka badan 40 milyan oo qof oo Faransiis ah ayaa internetka wax kaga iibsadeen. Sidaa darteed shabakadu waxay u taagan tahay dabeyl lama huraan u ah ganacsatada. Laakiin sidee ku bilaabi kartaa? Iibinta khadka tooska ah waxay muujineysaa dejinta qaab u heellan (shirkad abuurid, falanqaynta suuqa, abuurista badeecada, horumarinta warbaahinta dhijitaalka ah) iyo baahinta istiraatiijiyad la wareegitaan ku habboon si loo abuuro taraafikada loona beddelo macaamiisha.
Maareeye kasta oo dukaanka internetka ah wuxuu u baahan yahay inuu abuuro aqoonsi nafsaddiisa ah iyada oo loo marayo suuq-geyn haddii ay ka soo horjeedaan tartanka. Halka xaaladaha qaarkood xooga la saarayo matoorada ...
Istaraatiijiyada 3 ee iibinta khadka tooska ah July 20th, 2021Tranquillus
READ Kooxda shaqeeya
horeNoqo Hagaar Iibiyaha
socdaNidaamka Io / abuuro ganacsi faa'iido leh / rakibi pixel FB